Goolhayaha kooxda kubadda cagta haweenka ee Iran oo lagu eedeeyay inuu yahay nin! | Radio Himilo
Home / Haweenka / Goolhayaha kooxda kubadda cagta haweenka ee Iran oo lagu eedeeyay inuu yahay nin!
Posted by: Ahmed Haaddi 9 days ago
Himilo – Xiriirka Kubadda Cagta Jordan (JFA) ayaa ku eedeeyay goolhayaha kooxda kubadda cagta haweenka Iran inuu yahay nin.
Zohreh Koudaei, oo 32 jir ah , ayaa tan iyo markaas ka jawaabtay codsigii JFA ee “hubinta jinsiga.”
“Waxaan dacweyn doonaa FA-ga Jordan,” Koudaei ayaa tiri sida uu sheegay wargeyska Turkiga ee Hurriyet. Waxaan ahay naag. Tani waa cagajugleyn ka timid Jordan.
Eedeynta ayaa timid ka dib markii Iran ay garaacday Jordan ee Uzbekistan 25-kii Sebtembar, si ay ugu soo baxdo koobkeedii ugu horreeyay abid ee Haweenka Aasiya. Koudaei ayaa laba rigoore ka badbaadisay ciyaartii ay ku badiyeen 4-2.
Maareeyaha kooxda Iran ayaa beeniyay eedeynta jinsiga wuxuuna sheegay in kooxda Jordan ay raadinayeen “cudurdaar” guuldarada ciyaarta.
Ciyaarta ka dib, JFA ayaa lagu soo waramayaa inay la xiriirtay Xiriirka Kubadda Cagta Aasiya (AFC) wax ku saabsan jinsiga Koudaei.
Warqad ku taariikhaysan Nov 5, JFA waxay soo xigatay shakiga “u-qalmitaanka ciyaartoyga ka qaybgalaya” waxayna ku andacootay in kooxda haweenka Iran “ay leedahay taariikh la xiriirta jinsiga iyo arrimaha dawooyinka kordhiya awoodda.”
JFA waxay ka codsatay AFC “inay bilowdo baaritaan hufan oo cad oo ay wadaan guddi khubaro caafimaad oo madax-banaan si ay u baaraan u-qalmitaanka cayaaryahanka su’aasha laga qabo iyo kuwa kale ee kooxda.”
Madaxweynaha JFA, Amiir Ali bin al-Hussein, ayaa warqadda kaga hadlay bartiisa twitter-ka Sabtidii, isagoo ku tilmaamay eedeymaha “arrin aad halis u ah haddii ay run tahay.” Waxa uu sidoo kale ugu baaqay AFC “fadlan hurdada ka kaca.”
Afhayeen u hadlay AFC ayaa yiri, “AFC kama faallooto baaritaannada socda ama dacwadaha, haddii ay run tahay ama ay suurtagal tahay.”
Tababaraha Iran, Maryam Irandoost, ayaa u sheegtay majaladda ciyaaraha ee Varzesh3 in shaqaalaha caafimaadka ee kooxdu ay “si taxadar leh u baareen ciyaaryahan kasta oo ka tirsan xulka qaranka dhanka hormoonnada si ay uga fogaadaan dhibaato kasta oo arrintan la xiriirta, sidaas darteed waxaan u sheegayaa dhammaan taageerayaasha inaysan ka welwelin. “
Koobka Haweenka Aasiya ee 2022 AFC wuxuu ka bilaaban doonaa Janaayo gudaha Hindiya.
Previous: Garsooraha Michael Oliver oo magacaabay ciyaaryahankii ugu xumaa ee uu la kulmo
Next: Imisa Naadi ayay dhibaatada ugu badan ka soo gaari doona AFCON bisha Janaayo EPL-ka?